प्रचण्डविरूद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता, कहिले तोकियो पेशी ? — Sanchar Kendra
प्रचण्डविरूद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता, कहिले तोकियो पेशी ?
काठमाडाैं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरूद्ध अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता समिर हायूले मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। मुद्दाको पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
विराटनगरको सभामा प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए। प्रचण्डले सर्वोच्चमा मुद्दा परेका कारण धैयर्तापूर्वक बसेको बताएका थिए।
‘हामीले धैर्यतापूर्वक सर्वोच्चले संविधानको मर्म र भावना अनुसार लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुसार, यो देशको जनताको भावना र आवश्यकता अनुसार गर्छ भनेर भरोसा गरेर बसेका छौं’, प्रचण्डले भनेका थिए, ‘जरूरी पर्‍यो भने म आज विराटनगरबाट भन्दैछु। देशैले सुने हुन्छ, जरूरी पर्‍यो भने हामी संसदको बैठक बस्छौं र यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्छौं। संविधानले हामीलाई संसदको बैठक बस्ने अधिकार दिएको छ। केपी ओलीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन।
संविधानको अधिकार प्रयोग गरेर केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउन सभामुखले सदनको बैठक आयोजना गर्ने हामी उपस्थित हुने र केपीलाई कारबाही गर्नेसम्म जान सकिन्छ। तर म के भन्छु त सर्वोच्चले सही नै फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ। सर्वोच्चले सही नै फैसला गर्छ भन्ने विश्वास भएकाले अहिले नै बसिएको छैन। जरूरी पर्‍यो भने त्यो विकल्प नेपाली जनतासँग छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भैरहेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरेको भन्दै अधिवक्ता हायुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चले यसअघि नै प्रधानमन्त्री, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई अदालतको अपहेलना मुद्दामा आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिइसकेको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिटमा आजबाट सरकारी पक्षको बहस सुरू भएको छ।
आजदेखि अदालतमा सरकारी पक्षले बहस गर्दैछ। सरकारी पक्षको बहसको नेतृत्व पूर्वमहान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले गर्दैछन्। खरेलले आज बहस गर्न लागेका हुन्। यसअघि हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध रिट निवेदन दिएको पक्षको बहस सकिएको थियो। आइतबार रिट निवेदक १३ जनासहित अरू वकिलको बहस सकिएको थियो।
रिट निवेदनका पक्षमा बहस गर्ने सबै वकिलहरू प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नएकाले यो असंवैधानिक कदम खारेज हुन पर्ने माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेलगत्तै अदालतमा रिट परेको थयो। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासमा विघटनको मुद्दाको बहस भैरहेको छ।